प्रायः सोधिने प्रश्नहरू - शंघाई लांग जे प्लास्टिक कं, लिमिटेड
हाम्रो उत्पादनहरू निर्माण र कारखाना द्वारा नै बेचिएको छ। हाम्रो कारखानामा भ्रमण गर्न स्वागत छ।
तपाईंको कम्पनी र कारखानाको शक्ति कस्तो छ?
हामी चीन मा पीवीसी बाड़ उद्योग को नेता हो, हामी तपाइँलाई धेरै प्रतिस्पर्धी मूल्य संग शीर्ष गुणवत्ता उत्पादनहरु प्रदान गर्न सक्छौं। हाम्रो पार्टनरहरू विश्वभर मा स्थित छन्, हाम्रो मुख्य बजारहरू उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, क्यानडा, युरोप, अष्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्व एशिया, युरोप, र दक्षिण अफ्रिका हुन्।
के तपाईं नमूनाहरू प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ?
हामी तपाईंलाई परीक्षण गर्न को लागी काटिएका नमूनाहरूको साना टुक्रा प्रदान गर्न सक्छौं। तपाईंले कुरियर शुल्क मात्र तिर्नु पर्छ। हामी पनि नमूनाहरूको सम्पूर्ण सेट प्रदान गर्न सक्छौं। तपाईं अर्डर गरे पछि नमूनाहरूको लागत फिर्ता हुनेछ।
टी / टी, भिसा, मास्टरकार्ड, ई-जाँच एल / सी, डीआईए, डी / पी, वेस्टर्न यूनियन भुक्तानहरू। हामी पनि अलीबाबा मा बीमा आदेश को एक ड्राफ्ट मस्यौदा गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईं सीधै अलीबाबा भुक्तान गर्न सक्नुहुन्छ।